Tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha dalka Libya -
Home World Tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha dalka Libya
Tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha dalka Libya
Migrants wearing lifejackets on a rubber dinghy are pictured during a rescue operation by the MSF-SOS Mediterranee run Ocean Viking rescue ship, off the coast of Libya in the Mediterranean Sea, February 18, 2020. Picture taken February 18, 2020. Hannah Wallace Bowman/MSF/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in tahriibayaal tiradoodu gaareyso 74 ay geeriyoodeen kadib markii doontii ay la socdeen oo cilladi ku timid ay ku degtay xeebaha dalka Liibiya.
Dalka Liibiya ayaa ah inta badan marinka tahriibayaasha ka soo carary dalal badan oo Afrika u badan kuwaas doonaya inay gaaraan wadamada qaaradda Yurub, waxaana dadkaasi ay badda Mediterranean-ka kala kulmaan dhibaatooyin badan.
Hay’adda IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 900 oo qof ay doomo kula dageen sanadkan, iyadoo 11,000 oo kale lagu celiyay Libya, halkaas oo ay sheegtay inay kala kulmaan xarig iyo xadgudubyo kale.
Arbacadii ayaa shan tahriibayaal ah ayaa dhintay halka 100 kalena la badbaadiyay kadib markii doontii ay la socdeen ay kula degtay xeebaha dalka Liibiya meel aan ka fogeyn jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa.
Muhaajiriin ayaa sidoo kale dhintay iyagoo isku dayaya inay gaaraan Jasiiradaha Canary ee dalka Spain kuwaas oo katagay Galbeedka Afrika.
140 ka mid ah ayaa bishii la soo dhaafay ku qaraqmay xeebta Senegal markii doontii ay la socdeen dab qabsaday oo ay degtay.
Wasaarada Arrimaha Gudaha Talyaaniga ayaa sheegtay in uu sare u kacay tirada dadka doonaya inay gaaraan dalka Talyaaniga sanadkan iyadoo soo galooti ka badan soddon kun ay gaareen xeebaha Talyaaniga halka sanadkii hore ay tiradaas ka ahayd toban kun oo ruux.
Previous articleFive years later, the Parisians remember how the terrorist attacks developed on 13 November
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo saxiixay heshiiska Doorashooyinka Dadban